Somaliland oo shaacisay in gobol kale ay ka billaabeyso musaafurinta reer Koonfurta - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandSomaliland oo shaacisay in gobol kale ay ka billaabeyso musaafurinta reer Koonfurta
October 15, 2021 News Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 1
Ku Soomaali Maxamed:Kiiska Badda
DAAWO VIDEO: Qosol leh Kenya oo isbadashey Qirtayna Soomaaliya Inay Ka Guulaystey”Way inaga Caqli badiyeen”
Waar nimankan yaa wax u sheega.
Marka hore in dad muslim ah la qaxiyo ama laga saaro guryahooda waa xaaraan, oo waatii qu’aanku sheegay. waxaa kaloo xiga waxii karaamo ahayd ee reer waqooyi lahaayeen ee lagu sheekayn kiray waa gob iyaduna ha iska saqiirto. Tan kale dad Soomaali ah oo aad isugu baahan oo meelalba wada jooga ama wada dhashay waxna isu dhalay cadawtinimo sidaa u qoddo dheeraata in la dhexdhigu miyaanay ahayn foolxumo taariikhda galaysa oo cidina aanay ka hadlay, oo waan khaldami karaaye hadii hal sheekha aa hal oday ah ama hooyo kasoo jeeda Hargeysa, Burco, Ceerigaabo amaba laascaanooday ka hadayshay ama ay u danqatay dadka ha la’iisheego.
Marka umad la rogayo waa marka dadku xaqqa iska indhatiraan ama ama xumaantu la waynaato. Miyaan la xusuusan Xarshin?
Maxaa beri lagu jawaabi iyadoo xaaladu sidaa loo ladan yahay ayka duwanaato meelkalena lagasoo kiciyo umad degaankan u dhalatay, oo hadana hantidoodii la dhaco. Waxaabase taa kasii wayn dadka dadka cunsiriyadeeyaa aakhirka iyagaa iscuna, waana xaqiiqo in ummaddu markay dadkale u ogolaato inay gudeheeda si nabad ah ula noolaadaan bay iyagiina dhexdooda kala badbaadaan
Shalay maanta iyo berri soo weeci faduusha taariikhduna ha qoranto.
Waxaa qoray maqaalkan gaaban Geele Naanaab oo maamule ka ah machadka saadaasha waayaha, horayna u qoray waarimayside war hakaa haro, iyo ‘foolxumo laba afleey. Waxaad kala xidhiidhi kartsaan mawjadaha hirarka gaagaaban iyo dhexyaalka maars iyo neptune.